Galmee jiraataa banuu
Kan armaan gadii keessaa tokko hojjedhu:
Faayilii banuu barbaaddu filiitii Banii cuqaasi.
Faayiloota Agarsiisuuf Daangessi
Walumaagalatti, galmeewwan hundi bakka jalqaba galmichaatti qareetiin banamu.
One exception appears when the author of a Writer text document saves and reopens a document: The cursor will be at the same position where it has been when the document was saved. This only works when the name of the author was entered in LibreOffice - PreferencesTools - Options - LibreOffice - User Data.
Qaree bakka qubannoo dhumarratti ol kaa'ametti qindeessuuf Shift+F5 dhiibi.
Galmee Duuwwaa Bani
Kabala walta'inaa irraa sajoo Haaraa cuqaasi yookiin Faayilii - Haaraa fili. Kuni galmee gosa galmicha ifta'ee bana.
Yoo xiyya sajoo Haaraa ti aanee jiru cuqaaste, baafatni xiqqaan kan keessaatti gosa galmee kan biroo filachuu dandeessu ni banama.
Sirna qaaqa faayilii yookan Qaaqawwan LibreOffice
Sirna dalagaa baay'ee irratti, sirna qaaqa faayilii yookan Qaaqawwan LibreOffice fayyadamuu dandeessa.
Qaaqni LibreOffice faayilii fe'iinsaa fi ol fe'ii deegara hayisa walindhaa https fayyadamuun.
Faayilii Saphuphuu Kaadima irraa Banuu
Sanduuqa qaaqaa keessaa URL galchuu Maqaa faayilii dandeessaBani. URL fayilii:/// yookan ftp:// yookan http:// eegaluu qaba.
Yoo qaaaqa LibreOffice fayyadamte, https:// huddeelsoo hayida walindhaa fi saphaphuu kaadimaa irratti galmee olkaa'uu dandeessa.
Yommuu qaaqa faayilii foddaawwanii irraa URL tiin faayilii bantu, foddaawwan garagalcha qe'ee faayilichaa kuftaalee aloolaa intarneetii keessatti argamu banu. Qaaqni faayilii LibreOffice faayilicha fagoo bana.
Faayilii - Bani
dhangiiwwan faayilii XML
Maykiroosoftii Ofiisii fi LibreOffice fayyadamuu
Title is: Galmeewwan Banuu